Tag: imisa barnaamijyo bishiiba | Martech Zone
Tag: imisa barnaamij ah bishii
Axad, Nofeembar, 8, 2015 Sabti, Febraayo 13, 2021 Douglas Karr
Ma soo degsatay noocii ugu dambeeyay ee barnaamijkeena moobiilka - iOS, Android? Weli waxaan ka shaqeyneynaa qaabeynta waxyaabaha laakiin qaabka ayaa jira, waana ku adkaatay dadaal kasta oo aan ku bixinno dhulka iyadoo ay ugu wacan tahay barnaamijka cajiibka ah ee dhismaha moobiilka ee ka socda Bluebridge! Aad ayaan ugu faraxsanahay fursadaha! Waxaan horeyba u haysannay boodhadhkeenna suuq-geynta iyo taxanaheenna 'MarketingClips' ee arjiga ku badinaya, sidoo kale! Waxaan sidoo kale daabacaynaa dhacdooyin xitaa waan diri karnaa